Screen Capture Engine | ThatsLuck.com
Screen Capture Engine
07 / 04 / 2021 25 / 12 / 2020 di wp_136893
Screen Capture Engine: mudunhu software yekubatanidza bots e ThatsLuck
Screen Capture Engine software yandakagadzira kurerutsa maitiro ekubatanidza mabhoti angu kune akasiyana mapuratifomu epamhepo epamhepo zvakanyanya sezvinobvira.
Kutenda kune iyi software iyo iwe yaunogona kurodha pasi ipapo kubva pane iyi link pazasi peji, iwe unogona kumisikidza roulette matafura eakasiyana online mapuratifomu (Authentic Mitambo, Evolution, Netent, nezvimwewo) nematanho mashoma akareruka.
Usati waenderera mberi yeuka izvo ThatsLuck iwe unogona zvakare kuwana yemahara zvemukati, kana iwe uchida kugara uchigadziriswa pane zvinyorwa zvinyorera kuchiteshi pa ► YouTube.
Kamwe iyo zip faira yadzingwa pane desktop yako, iwe unongofanirwa kuvhura zvinoitwa uye chirongwa ichi chinobva chagadzirira kushandisa.
Chinhu chete chekuita kupinda mu activation kodhi iyo iwe yaunowana pazasi peji rino.
Sezvauri kuona iyo skrini ye Screen Capture Engine ine zvese zvekutora mabasa zvakapihwa.
Iko kushandiswa kuri nyore uye iwe unozogona kukoshesa zvakwakanakira ipapo ipapo kana iwe watotenga iyo bot Roulette Bias Sniper, iko kushandiswa kweiko - kubva mhando 8.0 zvichienda mberi - inopa kubatana neiyi nyowani screen yekubata injini na ThatsLuck.
Kana iwe wakatenga yekutanga vhezheni ye Roulette Bias Sniper (kana imwe software) usanetseke, zvese zvakagadziridzwa zve ThatsLuck vanogara vakasununguka, kana usati watoita kudaro, dhawunorodha vhezheni itsva uye umise nekodhi iri yako, izvo zvinogara zvichishanda!
Zvekugadziriswa kwesoftware uye kubatana ne Roulette Bias Sniper (kana nemamwe mabhoti paachawanikwa), unogona kutarisa vhidhiyo pachiteshi ► YouTube.
Nekudaro, kana iwe uine kusahadzika kana mibvunzo nezve kushandisa chirongwa ichi, unogona pachena kundibata nekuzadza iyo ► fomu rekutsigira.
YEMAHARA KUSHANDISA KODZERO
Screen Capture Engine 🎁
File Download	SCEngine2.zip - 2 MB
Kategori Roulette Chisungo navigation
Download 4974 Downloads